Hava-Sen ၏အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်ဖော်ပြချက်။ RayHaber
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်Istanbul Airport မှ Hava-Sen ၏ဖော်ပြချက်
12 / 11 / 2019 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, လေဆိပ်, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ
Istanbul လေဆိပ်တွင်အလုပ်လုပ်နေသော TGS ၀ န်ထမ်းများ၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုအခြေအနေများဆက်လက်ရှိနေသည်။ The Airline Employees Union (Hava-Sen) က၎င်းတို့အနေဖြင့်အလုပ်သမားများအားတရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်အလုပ်သမားသမဂ္ဂမဟုတ်သော်လည်းအလုပ်သမားများနှင့် ပတ်သက်၍ စဉ်းစားရန်လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Istanbul လေဆိပ်ရှိတူရကီ Groud ဝန်ဆောင်မှု (TGS) ၀ န်ထမ်းများ၏လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေဆိုးဝါးနေဆဲဖြစ်သည်။ လေဆိပ်ကနေအခြေချတဲ့နေရာတွေအထိအကွာအဝေးကြောင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာအချိန်ဖြုန်းခြင်းနဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကြာချိန်တွေဟာ ၀ န်ထမ်းတွေကိုမပျော်စေခဲ့ဘူး၊
Hava-Sen ၏ရှင်းပြချက်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
26.TİS၏အကောင်အထည်ဖော်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့စောင့်ကြည့်လေ့လာပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏အားနည်းချက်များနှင့်အမှားအယွင်းများရှိသော်ငြား၎င်းကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက်၎င်း၏ပြင်ဆင်မှုနှင့်အတည်ပြုမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်ကောင်းစွာသိထားသည်။ TİSသည် ၀ န်ထမ်းများ၏အခွင့်အရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားကိုအကာအကွယ်ပေးသည့်အရေးအကြီးဆုံးစာရွက်စာတမ်းဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာအလိုတော်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ၎င်းကိုတစ်ဖက်သတ်သို့မဟုတ်လျှို့ဝှက် protocol များဖြင့် ပြင်ဆင်၍ မရပါ။ 26 ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် TIS တွင်ပါ ၀ င်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည် protocol များဖြင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချမှတ်မည့်ပြbeနာများ၏အခြေအနေကိုစုံစမ်းခဲ့သည်။ အချက်အလက်များကိုလေ့လာလိုပါကသင်နှင့်ရလဒ်များကိုသင့်အားမျှဝေလိုပါသည်။
1. 26 သည်ကျွန်ုပ်တို့၏သတိပေးချက်များအားလုံးရှိနေသော်လည်း New Place သို့ပြောင်းရန်အတွက်စိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းပေးသည်။ ၎င်းသည် TIS တွင်မည်သည့်နည်းနှင့်မျှပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိပါ။ အခုငါတို့ကံမကောင်းတာမှန်တာတွေ့ပြီ။ အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထွက်အလုပ်လုပ်အတွက်ကြီးမားသောအခက်အခဲများနေဆဲရှိပါတယ်။ ၀ န်ဆောင်မှုများသည် ၀ န်ထမ်းများအားအဆင်ပြေစေရန်မပေးနိုင်ပါ။ မိမိကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ရန်သွားသူများသည်ကြီးမားသောအခက်အခဲများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်။9သည်တစ်နာရီအချိန်ပိုကြာသည်။ ၀ န်ထမ်းများသည်မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ရမည်။ ဝန်ဆောင်မှုယာဉ်မောင်းများသည်သီးခြားပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလုပ်ခွင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးရှုံးမည့်မိတ်ဆွေများ၊ မတော်တဆမှုတစ်ခုမည်မျှရှိမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မခန့်မှန်းနိုင်ပါ။ 13-4 ကြိမ်များသည်ကြီးမားသော terminal terminalရိယာတွင်မြေပြင်အမှုထမ်းများ၏နေ့စဉ်လမ်းလျှောက်မှုအကွာအဝေးကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ၀ န်ထမ်းများ၏စားနပ်ရိက္ခာနှင့်အိမ်သာပြproblemsနာများနှင့်အဖွဲ့ခန်းများ၊ terminal terminalရိယာ၊ ဝင်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်တံခါးများနှင့်လေယာဉ်များအကြားလေယာဉ်အမှုထမ်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုလုံလောက်စွာမဖြေရှင်းနိုင်ပါ။
2. 26.TİSတွင်ဖြေရှင်းမည့်ကတိထားသည့်ပြofနာများထဲမှတစ်ခုမှာgörev၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အဖွဲ့ ၀ င်များပါ ၀ င်သည်။ အရည်အချင်းပြည့်မှီသောသမဂ္ဂသည်ကော်မရှင်တစ်ခုတည်ထောင်ပြီးပြီဟူသောဟောပြောချက်ထက် ပို၍ မသွားနိုင်ပါ။ HAVA-SEN အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လစဉ် SHT-FTL နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများကိုဆက်လက်ပြုလုပ်သည်။ မတည်ငြိမ်သောအဖွဲ့များကိုအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်အနားယူခြင်းတွင်စီစဉ်ရန်လိုအပ်သောအရေးကြီးကိစ္စရပ်များမှာထင်ရှားနေပြီဖြစ်သည်။ SHN-FTL ၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုဖော်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့် ၀ န်ထမ်းများ၏အကျိုးစီးပွားအတွက် 95 ။ အဆိုပါအရည်အချင်းကိုသမဂ္ဂဆောင်းပါး၏ပြprovisions္ဌာန်းချက်များတည်ထောင်ရန်လိုအပ်သောအားထုတ်မှုမထားဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံအကျဆုံးအခွင့်အရေးများဖြစ်သောဥပမာ N ဒေသန္တရအချိန် 95: 03 နှင့်တစ်နေ့တည်းတွင်အလုပ်ပိတ်သိမ်းခြင်းများ၊ “ ရုံးပိတ်ရက်များကိုမရရှိနိုင်ပါ၊ နောက်ဆက်တွဲအခမဲ့ရက်များ (00: 00 local) önemli ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေး 00 ရန်။ ကာလ Tis'de မပါဝင်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောရရှိသောအခွင့်အရေးများဆုံးရှုံးခြင်းသည်ကုန်သွယ်ရေးသမဂ္ဂ၏စိတ်ဓာတ်နှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်သည်။ ပြည်ထောင်စုကမဆုံးရှုံးသင့်ဘူး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လေယာဉ်အမှုထမ်းများထံမှရရှိသောအခွင့်အရေးကိုနှောင့်နှေးမှုမရှိဘဲထုတ်ပေးသော protocol တစ်ခုဖြင့်ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်တောင်းဆိုသည်။
3. လစဉ်လတိုင်း၊ 500-700 အခန်း ၀ န်ထမ်းများကိုအထူးလေ့ကျင့်ရေးအမည်ဖြင့်လေယာဉ်မှခေါ်ဆောင်သွားပြီးကုမ္ပဏီက၎င်းတို့အားမပေးသောလေယာဉ်ပျံလျော်ကြေးနှင့်လျော်ကြေးပေးသည်။ သို့သော်အလားတူကာလတွင် 700 သည်လေယာဉ်အမှုထမ်းစုဆောင်းမှုအတွက်ကြေငြာခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်နေပုံရသောဤအခြေအနေသည်ပြသနာမှာအတွေ့အကြုံရှိဝန်ထမ်းများကိုအမြန်ဆုံးဖယ်ရှားရန်၊ A0 ၀ န်ထမ်းများနေရာတွင်အစားထိုးရန်၊ လစာကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီတွင်အရည်အချင်းအခြေပြုသည့်တာ ၀ န်ပေးခြင်းစနစ်မရှိသောကြောင့်လေကြောင်းသည်သွေးဖြင့်ရေးသားသည်ကိုသူတို့နားမလည်ပါ။ သူတို့ကလုပ်သက်စီနီယာနဲ့အတွေ့အကြုံဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာမသိဘူး။ ပြည်ထောင်စုဟာပန်းကန်တစ်ချပ်ကိုင်ထားတယ်။ စင်စစ်အားဖြင့်ကြိုးပမ်းမှုဖြင့်ရေးဆွဲထားသောလက်မှတ်လက်မှတ်များသည်ယုတ္တိရှိသည့်အကြောင်းပြချက်များမဟုတ်ဘဲနီပိုတစ်စန်နှင့်နံ့သာပေါင်း၏အနံ့သာဖြစ်သည်။
4. လေယာဉ်မှူးဝယ်ယူမှုကိုကုမ္ပဏီကရပ်တန့်လိုက်သည်။ 24 MAX သည်ပျံသန်းရန်အကြောင်းပြချက်မရှိပေ။ သို့သော် 2020 သည်ပထမလများမှစတင်ပျံသန်းလိမ့်မည်ဟုယူဆကြသည်။ လေ့ကျင့်မှုအချိန်ယူရသည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့အရင်ကမြင်ခဲ့သလိုပဲလေယာဉ်တွေအရင်လာပြီးအသင်းတွေကိုဖွဲ့တယ်။ မလုံလောက်ပါကပြင်ပလေယာဉ်မှူးတစ် ဦး အားခေါ်ဆောင်သွားသည်။ သောမတ်စ်ကွတ်၊ ဂျက်လေကြောင်း၊ ဂျာမနီကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများသည်ကမ္ဘာ့လေယာဉ်ပျံသန်းမှုတွင်ကျဆင်းခဲ့သည်။ Ryan Air ကလှုပ်နေသည်။ ထို့ကြောင့်စျေးကွက်သို့နိုင်ငံခြားစမ်းသပ်မောင်းနှင်မှုအမြောက်အများရှိနေသည်။ ကွာဟချက်ကိုပိတ်ဖို့ပိုလွယ်တယ်။ သို့သော်တူရကီလူငယ်လေယာဉ်မှူးများကိုအခွင့်အလမ်းပေးခြင်းသည်ရေရှည်ဆင်ခြင်တုံတရားဖြေရှင်းချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အနည်းဆုံးအရည်အချင်းပြည့်မီပြီးစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအဆင့်သို့ရောက်သောလေယာဉ်မှူးများကိုအခွင့်အရေးပေးသင့်သည်။
5. ကျွန်ုပ်တို့သည် 29 မေလ 2019 တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ရွေ့လျားရမည့်ကုန်ကျစရိတ်၊ စတုရန်းအသစ်၏အခက်အခဲများ၊ ခရီးသည်များနှင့်ဘဏ္difficultiesာရေးအခက်အခဲများလျော့နည်းလာခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်ကကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည် 1500 မတည်ငြိမ်မှုကိုစွန့်လွှတ်ရန်သို့မဟုတ်လစာတိုးမြှင့်မှုကိုလျှော့ချရန်အတွက်လိုအပ်သောအစီအမံများကိုပြုလုပ်မည်။ အများပြည်သူဆိုင်ရာသဘောထားစစ်တမ်းများကြောင့် ၀ န်ထမ်းများက၎င်းအားသဘောတူခြင်းအားဖြင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသောပြည်ထောင်စုသည်တောင်တက်ခြင်းကိုလျှော့ချခဲ့သည်။ အခုငါတို့တူညီတဲ့အချက်ပေါ်လာပြီ။ ပြည်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး က“ ဒီကိစ္စကိုသူတို့လုပ်နေတယ်။ ငါတို့ဟာဘယ်တော့မှငွေနဲ့မပတ်သက်ဘူး ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးထားသောထပ်တိုးတန်ဖိုးကိုဆုချလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်ခဲ့သည်။ သို့သော်သမဂ္ဂကို 'မုန့်' ဟုလူသိများသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလုပ်ရှင်အားနောက်တဖန်ချစ်စရာကောင်းသောပုံပန်းသဏ္ဌာန်မျိုးမသွားရန်သတိပေးသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ယုံကြည်မှုနှင့်ပတ်သက်သောခံစားချက်အားနည်းသွားပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှပြန်လာခြင်းသည်အမြတ်အစွန်းမဟုတ်၊ အရှုံးမဟုတ်ပါ။ ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်နည်းလမ်းမှာ ၀ န်ထမ်းလစာကိုကြည့်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၀ န်ထမ်းများအားထိခိုက်နစ်နာစေသောအလေ့အကျင့်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးမပြုရန်၊
6. TGS ၏သူငယ်ချင်းများက၎င်းတို့သည်ဖိအားများနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုများစွာအောက်တွင်ရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် TGS ဖွဲ့စည်းပုံ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စီးပွားရေးပေါ်လစီများကိုမေးခွန်းထုတ်စရာမရှိပါ။ သို့သော်သူတို့၏အလုပ်သည်သူတို့အတွက်အလွန်အရေးကြီးပြီးတန်ဖိုးရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူလစဉ် ၀ န်ထမ်းတစ်ရာကျော်ကိုရာထူးမှဖယ်ရှားပစ်ပြီးအချို့မှာမုန့်အတွက်အဆိုးရွားဆုံးသောကုသမှုခံယူရသည်။ ဥပဒေ၏ပြprovisions္ဌာန်းချက်များသည်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာရှိနေခြင်း၊ လိုချင်သူမည်သူမဆိုသွားရန်အခွင့်အရေးရှာဖွေခြင်းကိုကန့်သတ်ထားသည်။ သို့သော်၎င်းကို 'အပြင်ဘက်' ဟုခေါ်သည်။ ဤအခြေအနေများအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဝန်ဆောင်မှု၏အရည်အသွေးကိုမေးခွန်းထုတ်သင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လေယာဉ်၏လုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုလူတစ် ဦး ချင်းစီ၏တိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးမှုဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ Swiss Chese သီအိုရီတွင်အလွှာတစ်ခုမှာ TGS ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏မန်နေဂျာများကိုလူသားနှင့်တရား ၀ င်တန်ဖိုးများကိုစဉ်းစားရန်ဖိတ်ခေါ်သည်
ချစ်ခင်ရပါသော ၀ န်ထမ်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသောသမဂ္ဂမဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့မှောက်တွင်သင့်ကိုကူညီပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အချက်အလက်များကိုသင့်ရှေ့မှောက်သို့ယူဆောင်လာရန်ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ဖြစ်သည်။ သင်၏အခွင့်အရေးနှင့်သင်၏ဥပဒေကိုကာကွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အနာဂတ်၌ဆိုင်ကလုန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အရေးပါမှုနှင့်တန်ဖိုးကိုတိုးပွားစေသည်။ ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့နဲ့သင့်တော်တဲ့ပြည်ထောင်စုထဲမှာရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Antalya လေဆိပ်မှ Memur-Sen မှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး…
အနုပညာငါ့ဝေစုနှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်လေကြောင်း Cargo စျေးကွက်
UDEM Hak-Sen ဥက္ကဋ္ဌ Peker TÜDEMSAŞသွားရောက်လည်ပတ်
အရာရှိ-Sen လွှဲပြောင်းနှုန်း 102 ဖို့လည်းမမျှတမယ့်
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရာရှိချုပ်-Sen Cetin Altun ကနေပိုကောင်းတဲ့ခရီးစဉ်ကို get
ဝန်ကြီး Arslan ထံမှအရာရှိချုပ်-Sen Views စာ
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရာရှိ - TC မှ TCDD လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ…
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရာရှိ -Sen မှ TCDD အထွေထွေမန်နေဂျာ Uygun 'သို့